Xbox One S Minecraft Edition, naanị maka ezi ndị Fans | Akụkọ akụrụngwa
N'oge Gamescon, Microsoft abụghị naanị gosipụtara ya desktọọpụ desktọọpụ ọhụrụ, kamakwa ahọrọla mbipụta ole na ole nke ụdị ama Xbox One S. Na nke a, ọ bụ a omenala nlereanya na a cubic anya si ma ama egwuregwu Minecraft. Nke ahụ bụ, na purest Minecraft cube ịke.
Ọ bụ eziokwu na e nweelarị ngwugwu ahịa ndị dabere na egwuregwu a ma ama. Agbanyeghị, Microsoft ahụla na ọ dabara na - ebe ọ bụ ya nwe egwuregwu ahụ, ọ kwesịrị ịsọpụrụ maka ihe ịga nke ọma ya niile. N'ihi ya Ọkpụkpọ Xbox One S Minecraft. Nwere ike ugbu a doputa gị unit site na ukara website nke ụlọ ọrụ. Ma ọ ga-adị na mmalite nke October.
Ọgwụgwụ nke afọ ahụ na-arụsi ọrụ ike na Microsoft. N’ọnwa Nọvemba, abia n’igwe njikwa ya lekwasịrị anya n’ihe dị n’ime 4K, ya na ndị ji ihe esere ese dị ike n’oge ahụ. Na mgbakwunye, anyị ga-agbakwunye aha ọhụrụ ndị a ga-ewepụta maka mkpọmnta oyi na mmemme ekeresimesi ya. O sina dị, You nwere ike ghara uche ndị ọzọ a pụrụ iche mbipụta lekwasịrị anya egwuregwu Minecraft.
La Xbox One S Minecraft Edition na-abịa na omenaala chassis na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na iji ụdị cubes nke egwuregwu ahụ. Tụkwasị na nke ahụ, agbakwunye Xbox njikwa na Creeper aesthetics, ị maara, ihe ndị ahụ e kere eke na-agbawa mgbe onye ọkpụkpọ ahụ bịakwutere ha. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịnweta onye na-ejikwa Minecraft ahazi na pink.
N'otu aka ahụ, nkwado ịdebe ihe njikwa ahụ na-agbakwunye, yana Egwuregwu Minecraft na mkpọ Redstone. N'aka nke ọzọ, ihe njikwa nwere ikike nke 1 TB nke ohere iji chekwaa ihe niile ịchọrọ. Cheta na a na-ere ihe njikwa ahụ na nsụgharị nwere obere ikike. Mgbe ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ya price, na Xbox One S Minecraft Edition ga-abanye n'ahịa ahụ na October 3. Na ọnụahịa ya dịtụ elu karịa ụdị nkịtị: euro 399,99.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Ndi Consolas » Xbox One S Minecraft Edition, naanị maka ezigbo ndị egwuregwu
Na Facebook ị ga-ahụkwa ezigbo onyinye ... site na ụlọ ahịa adịgboroja